Trump Qunfac Ayaa Ku Bilowday..Qandhadiisana Kor Ayey U Kacday | Xaqiiqonews
Trump Qunfac Ayaa Ku Bilowday..Qandhadiisana Kor Ayey U Kacday
Wargeyska Vanity Fair oo soo xiganaya mas’uuliyiin sarsare oo Mareykan ah ayaa ku waramaya in Trump uu bilaabay qunfac halka qandhadiisan ay kor u kacday dib markii dhawaan laga helay cudurka Covid-19.
Siyaasiyiin Jamhuuri ah kuwaasi oo ku dhaw aqalka cad, ayaa wargeyska u sheegay in Trump ay ka soo muuqdeen calaamadaha caanka ah ee Karoona, sida qunfac badan iyo qandho daran.
Mid ka mid ah xogta wargeyska loo soo tabiyey, waxa ku warameysaa walwal laga qaabo cudurka cusub ee Trump in ay kor u kacday gudaha aqalka cad. madaama da’diisu ay tahay 74 sano jir.
Sidoo Kale Aqri..Trump iyo Biden..Mustaqbalka Cabsida Leh ee Mareykanka
Ilaha la soo xiganaya waxaa kale oo ay sheegayaan qorshaha Trump ee ah in isku dayaayo in uu dadka la hadlo si hoos uga dhigo walwalka laga qabo xaaladdiisa caafimaad, gaar ahaan Trump ayaa laga xusuustaa sida uu u fududeysan jiray xanuunkan 6 bilood ee la soo dhaafay.
Xaaska Trump, Milana ayaa laga sheegayaa in aysan wili ka soo muuqan caalamado adag oo xanuunka ah.
Trump ayaa jimcadii la soo dhaafay ku soo qoray Tuwiterka, in isaga iyo xaaskiisa uu ku dhacay Karoona Fayrus, ayna dareemayaan caalamado fudud.